Hesekiel 45 | Intanɛt So Bible| Wiase Foforɔ Nkyerɛaseɛ
45 “‘Na sɛ morekyɛ asase no sɛ mo agyapade a,+ muntwa bi mma Yehowa sɛ ntoboa,+ asase no fã a ɛyɛ kronkron.+ Ne ntwemu nyɛ basafa mpem aduonu anum, na ne tɛtrɛtɛ nyɛ mpem du.+ Ɛbɛyɛ kronkron afa n’ahye nyinaa so. 2 Na eyi mu na kronkronbea no befi; ne ntwemu ne ne tɛtrɛtɛ nyinaa bɛyɛ ahanum ahanum—ɛyɛ ahinanan.+ Na ne mfikyisase a mmoa bedidi so bɛyɛ basafa aduonum wɔ ɔfã biara.+ 3 Munsusuw asase a ne ntwemu yɛ basafa mpem aduonu anum na ne tɛtrɛtɛ yɛ mpem du mfi nea moatwa no mu, na ɛhɔ na wɔde kronkronbea no besi, akronkronne mu ade kronkron no.+ 4 Ɛbɛyɛ asase no mu beae kronkron ama asɔfo no,+ wɔn a wɔba Yehowa anim bɛsom+ wɔ kronkronbea hɔ no. Ɛhɔ na wɔde wɔn adan besisi, na ɛbɛyɛ beae kronkron ama kronkronbea no. 5 “‘Ne ntwemu bɛyɛ mpem aduonu anum na ne tɛtrɛtɛ ayɛ mpem du.+ Ɛbɛyɛ Lewifo a wɔsom wɔ Fie hɔ no dea. Na wobenya adidibea aduonu.+ 6 “‘Na muntwa asase a ne tɛtrɛtɛ yɛ mpemnum na ne ntwemu yɛ mpem aduonu anum mma kurow no sɛ ntoboa kronkron.+ Na ɛno bɛyɛ Israel fie nyinaa dea. 7 “‘Na obirɛmpɔn no de bɛda ntoboa kronkron no ne kurow no benkum ne ne nifa,+ ntoboa kronkron no ne kurow no nkyɛn, asase a ɛda atɔe fam kɔ atɔe ne nea ɛda apuei fam kɔ apuei no. Na ne tenten ne mmusua mmusua no de bɛyɛ pɛ, fi atɔe hye so kosi apuei hye so.+ 8 Na asase yi bɛyɛ n’agyapade wɔ Israel. Na m’abirɛmpɔn rentan me man ani bio,+ na wɔde asase no bɛma Israel fie sɛnea wɔn mmusua te.’+ 9 “Nea Awurade Tumfoɔ Yehowa aka ni, ‘Ayɛ yiye, Israel abirɛmpɔn!’+ “‘Munnyae amimdi ne nsisi,+ na mummu atɛntrenee nni asɛntrenee.+ Munyi mo apoobɔ mfi me man so,’+ Awurade Tumfoɔ Yehowa asɛm ni. 10 ‘Momfa nsenia, efa susude, ne bat susuhina a ɛteɛ nsusuw ade.+ 11 Momma efa ne bat susuhina nyɛ pɛ, na bat susuhina nyɛ homar nkyem du mu biako, na homar nkyem du mu biako nyɛ efa biako;+ homar dodow nyɛ saa ara. 12 Na dwetɛbona+ nyɛ gerah aduonu;+ na nnwetɛbona aduonu, nnwetɛbona aduonu anum, ne nnwetɛbona dunum nyɛ mane biako mma mo.’ 13 “‘Na eyi ne ntoboa a momfa mmra: Momfa awi efa nkyem asia mu biako mfi homar biako mu, na momfa atoko nso efa nkyem asia mu biako mfi homar biako mu; 14 na ngo no nso, momfa bat susuhina nsusuw. Bat yɛ kor nkyem du mu biako. Na bat du yɛ homar biako, efisɛ bat du yɛ homar biako. 15 Munyi oguan biako mfi nguankuw no mu, kyerɛ sɛ oguan biako mfi Israel mmoa ahanu biara mu.+ Na wɔmfa eyinom mmɔ aduan afɔre+ ne ɔhyew afɔre+ ne asomdwoe afɔre,+ na wɔmfa mpata mma wɔn,’+ Awurade Tumfoɔ Yehowa asɛm ni. 16 “‘Asase no sofo nyinaa de ntoboa+ yi bɛma Israel obirɛmpɔn no.+ 17 Sɛ Israel fie redi afahyɛ+ anaa ɔsram foforo+ anaa homeda+ anaa nnapɔnna+ biara a, obirɛmpɔn+ no na ɔde ɔhyew afɔre+ ne aduan afɔre+ ne nsã afɔre+ ho nneɛma bɛma. Ɔno na ɔde bɔne ho afɔre ne aduan afɔre ne ɔhyew afɔre ne asomdwoe afɔre ho nneɛma bɛma ma wɔde apata ama Israel fie.’ 18 “Nea Awurade Tumfoɔ Yehowa aka ni, ‘Ɔsram a edi kan no da a edi kan no, fa nantwinini kumaa a dɛm nni ne ho+ dwira kronkronbea no ho.+ 19 Na ɔsɔfo no mfa aboa a wɔde bɔɔ bɔne ho afɔre no mogya no bi nyɛ Fie no apongua+ ho ne afɔremuka no mfomfamho no ntwea anan+ no so ne mfinimfini hɔ adiwo no pon ho. 20 Na saa ara na wobɛyɛ ɔsram no da a ɛto so ason no, efisɛ ebia na obi adi mfomso+ esiane n’ani a ɛnna ne ho so anaa osuahu a onni nti, na mompata mma Fie no.+ 21 “‘Ɔsram a edi kan no da a ɛto so dunan no, munni twam+ no. Ɛyɛ nnanson afahyɛ a mubedi paanoo a mmɔkaw nnim.+ 22 Saa da no, obirɛmpɔn no mfa nantwinini kumaa mmra mma wɔmmɔ bɔne ho afɔre mma ɔno ne ɔman no.+ 23 Na nnanson afahyɛ+ no nyinaa ɔmfa anantwinini nkumaa ason ne adwennini ason a dɛm nni wɔn ho mmra mma wɔmfa mmɔ ɔhyew afɔre mma Yehowa da biara, nnanson;+ na wɔmfa ɔpapo nso mmɔ bɔne ho afɔre da biara.+ 24 Na ɔmfa esiam efa biako nka nantwinini kumaa no ho, na ɔmfa efa biako nso nka odwennini no ho mmɔ aduan afɔre, na efa biara nso ɔmfa ngo hin biako nka ho.+ 25 “‘Na ɔsram a ɛto so ason no da a ɛto so dunum wɔ afahyɛ+ bere no mu no, ɔmfa nea ɔde bae nnanson+ no ara bi mmra, te sɛ bɔne ho afɔre, ne ɔhyew afɔre, ne aduan afɔre, ne ngo.’”